प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, विश्राम दिऔँ’-गगन थापा – Life Nepali
प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, विश्राम दिऔँ’-गगन थापा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले उपचारको क्रममा सिंगापुरमा हुनुहुन्छ । नेपाली काँग्रेस उहाँको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । हामीले अथक कसरत गरेर संसदबाट केही समय अगाडी एउटा कानून पारित गर्यौँ । कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने छैन । कानुनको पालना गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । नागरिकको यस विषयको अन्य चासोहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा बताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको उपचारको बारेमा यथार्थ जानकारी सरकारले संसदलाई गराएको छैन । जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा जान्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नीजि चिकित्सकलाई उदृत गरेर छापाहरुमा आएको सिमित सूचनाको आधारमा यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ । हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण सुधार होस् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनु भएको इच्छाशक्ति, क्रियाशिलता, योगदान संसारको लागि नमुना बनोस् । तर केही चिकित्सकहरुले संकेत गर्नुभएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको जस्तो उपचार अर्थात् पटक पटक विदेशमा गएर केही समय विश्राम गरेर उपचार गर्नुपर्ने भयो भने चाहीँ के गर्ने ? संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद निहित छ र मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संसदीय पद्दतीमा संसदको कामको सिर्जना पनि प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छ । प्रधानमन्त्री सेरोमोनियल पोजिसन होइन । डे टु डे जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ बढाइएको छ ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै पुरा गर्ने इच्छाशक्ति राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर इच्छाशक्ति मात्रै सबै कुरा होइन । शारिरीक स्वास्थ्यले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको प्रमुख हुनुहुन्छ ।
कार्यकारिणी प्रमुख एकैपटक लामो समयसम्म देशबाट बाहिर बस्दा एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक मर्यादा आदिमा जोखिमको प्रश्न त छदै छ । प्रत्येक २–३ महिनामा १०–१२ दिन विदेश गएर टेलिप्रिजेन्स मार्फतबाट मन्त्रीहरुको ब्रिफिङ लिएर देश चलाउने कुराबाट शासकिय जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएको भए फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर कष्ट दिएर भएपनि प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको अपेक्षा राख्ने कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो । तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन । यहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत छ ।
सजिलैसँग संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सक्छ । १०१ प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति यो पार्टीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । तर यस्तो बेलामा हामी विश्राम दिन किन चाहिरहेका छैनौँ । मैँले धेरै पटक नेकपाका युवा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको छु । प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बा बिरामी हुनुभएको के भन्थ्यौँ ? बा, धपेडी नगर्नुस्, आराम गर्नुस् । हामी हाम्रो बा लाई त्यसो भन्छौँ । तर प्रधानमन्त्री बा लाई किन यस्तो भन्न सक्दैनौँ । यो म कसैलाई मात्र भनिरहेको छैन । यो गल्ती हामीले पनि गर्यौँ । यो अन्याय हिजो हामीले पनि गर्यौँ । र सबैभन्दा बढी नजिक बस्ने मान्छेले अन्याय गर्यो । यो अन्याय तपाईँहरु नगर्नुस् । यो गल्ती तपाईँहरु नदोहोर्याउनुस् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस् । किनकी नेपालको आन्दोलनमा यत्रो ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यत्रो ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको, यत्रो ठुलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको । यति मात्रै होइन, स्वाभिमानको लडाईँमा एउटा अथक योद्धाको रुपमा काम गर्नुभएको प्रधानमन्त्री हामी लामो समयसम्म हाम्रो बिचमा अभिभावकको रुपमा देख्न चाहन्छौँ । तर यो कुरा त्यतिखेर मात्रै सम्भव छ, शरीर सबैको शरीर हो । मन पनि सबैको मन हो । प्रधानमन्त्रीको मनको इच्छाशक्तिको म प्रशंसा गर्दछु । म फेरि पनि कामना गर्छु, त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो रोष्टममा उभिएर हामीलाई बताइदिने अवस्था बनोस् । हामी सबै पार्थना गर्छौँ । कामना गर्छौँ । कि लगातार कुनै विश्राम नलिकन काम गर्न सक्ने अवस्था बनोस् । तर यस्तो अवस्था आउँदैन भने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरा सुन्दै गर्दा कतिलाई रिस पनि उठ्ला । तर कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, यो देशको कुरा पनि हो । तर देश भन्दा पहिला यो मानवियताको कुरा पनि हो । हामी प्रधानमन्त्री एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सौँ ।
Next कांग्रेसका नेताहरुले भने, ‘मन्त्रि हुन् त योगेश भट्टराई जस्तो’ हुनु पर्छ !